मलेसियामा तीन फरक कम्पनीमा जागिर, तलब रु ३४,५३६ ! • raradiodarpan.com
मलेसियामा तीन फरक कम्पनीमा जागिर, तलब रु ३४,५३६ !
मलेसिया सरकारले विभिन्न पदमा नेपाली कामदारको खोजी गरिरहेको छ । यसमा सेक्युरिटी गार्ड, क्लिनर र सामान्य कामदारको काम पर्छन्। मलेसियाको अर्थतन्त्र निरन्तर बढ्दै गएकाले यी कामदारहरूको माग उच्च छ। मलेसियामा रोजगारीको खोजीमा रहेका नेपाली कामदारहरूका लागि यो ठूलो अवसर हो। तलबहरू प्रतिस्पर्धात्मक छन् र लाभहरू उत्कृष्ट छन्।
थप रूपमा, भिसा र टिकट लागत कम्पनीले कभर गर्दछ। एउटा कम्पनीको नाम मिलेनियम पैट्रियट सेक्युरिटी सर्भिसेज (M) SDN हो। BHD, प्रशस्त उपज SDN। BHD। बिना SDN लाई। BHD। मलेसियामा निर्माण तथा अन्य हातहतियारको काममा कार्यरत मजदुरहरु । कम्पनीले धेरै देशबाट धेरै कामदारहरूलाई रोजगारी दिइरहेको छ
मलेसियामा काम गर्ने अवसर पाउनेमा नेपाली कामदार पनि परेका छन् । तर, लामो समयदेखि काम गर्ने समय र ओभरटाइमको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि यी कामदारलाई कम्पनीमा अन्य कामदारले सरह सुविधा दिइँदैन ।
निर्माण, कृषिलगायतका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले कानुनले तोकेको वार्षिक बिदा नदिइएको र सम्झौता दुई वर्षको मात्रै भएको भन्दै देश छाड्नुपर्ने बताउँछन् । धन्यवाद विदेशी श्रम विभागले निम्न जानकारी प्रदान गर्दछ
तपाईंले कम्पनीबाट व्यक्तिगत भिसा प्राप्त गरेपछि तपाईंको जम्मा गरिनुपर्छ। सकेसम्म चाँडो भाउचर सङ्कलन गर्नुहोस्य हाँ रहेका देशहरूमा रहेका नेपाली कूटनीतिक कार्यालयहरू छन् जहाँ तपाईं काम गर्नुहुन्छ वा काम गर्नुहुन्छ। तिनीहरूको सम्पर्क जानकारी नोट गर्न निश्चित गर्नुहोस्। आवश्यक पर्दा तपाई सजिलैसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ
तपाईंले विदेशमा काम गर्न अघि अभिमुखीकरण मार्फत जानुपर्छ ! विदेशमा रोजगारीको लागि, कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यात्रा गर्नु अघि देश, कम्पनी, र तपाईंले प्राप्त गर्ने सुविधाहरू होसियारीपूर्वक अनुसन्धान गर्नुहोस्। तपाईंले यसलाई ध्यानपूर्वक पढिसकेपछि मात्र तपाईंले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। यो कागजातको प्रतिलिपि हातमा छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
विदेश जाँदा अन्य विमानस्थलको सट्टा नेपाली विमानस्थलको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ, अन्यथा ठगीको सम्भावना हुन्छ । यदि तपाईंसँग यस विज्ञापनको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृपया वैदेशिक श्रम विभाग, ताहाचललाई सम्पर्क गर्नुहोस्य दि तपाइँ वैदेशिक रोजगारको बारेमा विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने निम्न निर्देशनहरू महत्त्वपूर्ण छन्!
तपाइँको कोटा कति बाँकी छ भन्ने थाहा पाउँदा तपाइँलाई आवेदन दिने कि नगर्ने निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ। यो कोटा पूरा भएको सम्भव छ। भर्ती एजेन्सीहरू र विदेशी रोजगारदाताहरूको लेनदेन इतिहास छ कि छैन पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईं यसलाई गुगल प्रयोग गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ। एसएमएस पठाउँदा तपाईंलाई कुनै पनि समयमा जानकारी प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ। 34001 मा पठाउन LT [space] [Lt-Number] टाइप गर्नुहोस्।